CNC Gbanwere Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
CNC Gbanwere Parts
Gịnị bụ CNC gbanwere?
CNC lathe bụ a elu-nkenke, elu-arụmọrụ akpaghị aka igwe ngwá ọrụ. Onwem na multi-ojii turret ma ọ bụ ike turret, igwe ngwá ọrụ nwere a dịgasị iche iche nke nhazi technology, ọ nwere ike hazie linear cylinders, diagonal cylinders, arcs na dị iche iche na mgbagwoju workpieces dị ka eri na grooves, na linear interpolation na okirikiri interpolation.
Na CNC gbanwere, ihe-ntuchi-ẹkenịmde na Chuck na-agba gburugburu, na ngwá ọrụ a na nri dị iche iche akụkụ, na ọtụtụ ngwá ọrụ shapes ike ga-eji kee chọrọ udi. Mgbe center nwere mbịne na-egwe ọka ọrụ, ị nwere ike ịkwụsị adiana na-ekwe ka-egwe ọka nke ọzọ shapes. Nke a technology na-enye ohere maka a dịgasị iche iche nke shapes, nha na ihe ụdị.
The ngwaọrụ nke CNC lathe na-atụgharị atụgharị center na-ndokwasa na turret. Anyị na-eji a CNC njikwa na a "ezigbo oge" ngwá ọrụ (eg Pioneer Service), nke nwekwara-akwụsị adiana na-agbakwụnye na ndị ọzọ ọrụ ndị dị otú dị ka egwu, grooves na-egwe ọka na-ebupụta.
Ọ bụrụ na ị chọrọ CNC mgbanwe, anyị bụ otu n'ime ndị kacha ike na competitively ọnụ Nsukka. Na 14 tent nke elu akpaka lathes, anyị otu nwere ike na-emepụta ngwá ahịa n'ụzọ ziri ezi ma na oge. The dịgasị iche iche nke mmepụta ike na-enye ohere Anebon na-enye pụrụ iche sample akụkụ. Anyị uka mmepụta ngwá ana achi achi anyị mgbanwe na obi ike. Ma anyị ga-izute mkpa nke ọ bụla ụlọ ọrụ anyị na-efe na ya zuru ezu, tiri ụkpụrụ. Anyị na-elekwasị anya na àgwà na ahịa ọrụ.
CNC mbịne akụkụ anyị Nlụpụta
Anyị na-emepụta a dịgasị iche iche nke CNC mbịne akụkụ 10 afọ na anyị engineering otu mgbe nyere anyị ahịa na ndị bara uru ngwọta na-edozi nsogbu ha na n'ichepụta CNC mbịne akụkụ. Anyị hụ anọgide elu àgwà machining, ọbụna na ikpe nke mgbagwoju akụkụ, iji mgbagwoju igwe modul na iji a ọkà CNC lathe iji rụọ ọrụ na igwe. N'ihi Anebon mgbe niile daputara elu kpọmkwem!
Machining nhọrọ CNC mbịne
Na anyị ọhụrụ na elu arụmọrụ ngwá esịnede CNC gbanwere emmepe na 4-axis mbịne igwe . Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke n'ichepụta nhọrọ. Ma dị mfe ma ọ bụ mgbagwoju tụgharịa akụkụ, ogologo ma ọ bụ obere tụgharịa nkenke akụkụ, anyị na-ọma onwem niile etoju nke mgbagwoju.
Prototype machining / efu usoro mmepụta
Production nke usoro ogbe nha
Ndị na-esonụ isiike ihe ọtụtụ ndị na-eji: aluminum, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa, naịlọn, ígwè, acetal, polycarbonate, acrylic, ọla, PTFE, titanium, ABS, ịkwanyere, ọla kọpa wdg
Ahịa Site Germany Gị The Company F ...
Anebon Hardware Co., Ltd. nwetara ISO900 ...
Nkenke ma dị ike CNC Machine
Factory Environment na Anebon
zinc anwụ mgbatị akụkụ, aluminum anwụ nkedo, nēfe akụkụ , na-anwụ mgbatị akụkụ , aluminum mgbatị, aluminum anwụ mgbatị akụkụ ,